Discrete phenomenon in the mix Inglese-Birmano - MyMemory
Hai cercato la traduzione di discrete phenomenon in the mixed ... da IngleseaBirmano
FUCK ME IN THE CUNT
je suis parle francais, tres bien tres bien
it hurts in the chest
When searching in the Dash:
Dash ထဲတွင် ရှာဖွေစဉ်-
မိသားစုထဲက တယောက်ယောက်မှာ နှလုံး ပြဿနာ၊ နှလုံး ရောဂါတွေ၊ နှလုံး သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ ကိုလက်စထရော မြင့်မာခြင်း၊ သွေးတိုးရောဂါ ရှိသလား
Cannot find file in the ZIP archive
အထုပ်အတွင်း ဖိုင် မရှိပါ
right in the middle of my chest
ကျွန်တော်/ကျွန်မ ရင်ဘတ် အလယ်တည့်တည့်မှာ
it is in the center of my chest
အဲဒါက ကျွန်တော် ကျွန်မ ရင်ဘတ် အလယ်မှာ
The disc in the drive holds data.
ဒရိုက်ဗ်ထဲက ခွေမှာ ဒေတာရှိနေသည်
ဖိုင်အတွင်း စကားလုံး သို့မဟုတ် စကားစုကို ရှာပါ
you are not registered in the password file
There is no children in the room.
ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည် အစဦး၌ ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိ၏။
ဘုံဗိမာန်တော်တိုက်မြစ်သည် သန့်ရှင်းသော တောင်ရိုးပေါ်မှာ တည်လျက်ရှိ၏။
like right in the center of the chest
ရင်ဘက် အလယ်တည့်တည့်လို နေရာမျိုး တည့်တည့်မှာ
Foreign countries visited in the last 28 days
လွန်ခဲ့သော 28 ရက်အတွင်း သွားရောက်ခဲ့သည့် ပြည်ပနိုင်ငံများ
ingredients (Inglese>Italiano)النشر (Arabo>Francese)unterschleißheim (Spagnolo>Inglese)napintas nak (Tagalog>Inglese)tuebene (Italiano>Romeno)antispasmolytika (Svedese>Inglese)1094 (Italiano>Inglese)ahla (Arabo>Tedesco)ま (Francese>Inglese)oliiviöljyllä (Finlandese>Inglese)video x x bangladeshi (Bengalese>Inglese)10 halimbawa ng mga pagkakakilanlan ng kabataan (Tagalog>Inglese)caecilius pecuniam numerat (Latino>Inglese)ka (Maori>Inglese)scrapes (Inglese>Tagalog)kilpailuympäristössä (Finlandese>Italiano)varjoainetehostettu (Finlandese>Ungherese)cyfweliad honna (Gallese>Inglese)impotent (Catalano>Tedesco)mas nakakaangat (Tagalog>Inglese)rechérche (Francese>Inglese)vincere vel mori (Latino>Inglese)hallintalaitteistoon (Finlandese>Ungherese)mírného (Ceco>Inglese)murid murid sedang membaca buku di perpustakaan (Malese>Inglese)